राती अबेर खाना खानुहुन्छ ? रोगको भारी बोक्दै हुनुहुन्छ « Janata Times
राती अबेर खाना खानुहुन्छ ? रोगको भारी बोक्दै हुनुहुन्छ
यसको अर्थ के हो भने, बिहानदेखि क्रमस खानेकुराको मात्रा घटाउँदै लानुपर्छ ।
हाम्रा ऋषिमुनीहरुले पनि सूर्योअस्तपछिको खाना बर्जित गरेको छ । साँझ सूर्य अस्ताइसकेपछि गरिने भोजनले शरीरमा पोषण होइन, विष पैदा गर्छ ।
तर, जमना बद्लिएको छ । अहिले हामी ‘डिनर’मा अभ्यस्त छौं । डिनर अर्थात रातको खाना । यो पनि भव्य हुनुपर्छ । संभव भए, माछामासु होस् । वाइन होस् । यस्तो गरिष्ठ भोजन गर्ने संस्कार हुर्कदैछ । आधुनिकताको नाममा हामी यसको नक्कल गरिरहेका छौं ।
राती ८, ९ वा १० बजे डिनर गर्ने तालिका छ, धेरैको । ११ बजे ओछ्यानमा घुस्रन्छौं । खाना खाएर केही समय विश्राम गर्नसाथ ओछ्यानमा घुसि्रन्छौं र लमतन्न परेर सुत्छौं । अब हामीले खाएको खाना शरीरभित्र के भइरहेको होला ?
खाना खाएपछि काम नगर्दा शरिरले खानालाई राम्रोसँग पचाउन सक्दैन । जसको कारण उच्च रक्तचापको समस्या सृजना हुन जान्छ ।